Spotify: Discover music, podcasts, and playlists 8.5.15.885 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 8.5.15.885 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ဂီတ & အသံ Spotify: Discover music, podcasts, and playlists
Spotify: Discover music, podcasts, and playlists ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Spotify နှင့်အတူသငျသညျအခမဲ့သီချင်းသန်းပေါင်းများစွာကစားနိုင်ပါတယ်။ သင်နှစ်သက်သောသီချင်းများနားထောင်ပါများနှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှဂီတကိုခံစား။
•သင့်အကြိုက်ဆုံးသီချင်း, အနုပညာရှင်, ဒါမှမဟုတ်အယ်လ်ဘမ်ရှာရန်
•သစ်ကိုဂီတ, ဗွီဒီယိုများနှင့် podcasts တွေကို၏လောကဓာတ်ရှာဖွေရန်
• Make နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖွင့်စာရင်းများကိုဝေမျှ
•သင့်မိုဘိုင်း, တက်ဘလက်, Desktop, Play Station, Chromecast ကို, တီဗီ, နှင့်စပီ Listen
တိုင်းခံစားချက်သို့မဟုတ်အခိုက်အဘို့အကြောင်းအရာ stream မှ Spotify download လုပ်ပါ။
ဂီတနှင့်ပိုပြီး Play - Spotify သင်တို့ကိုလည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြားကိုမတှေ့နိုငျသောမူရင်းအပါအဝင် podcasts တွေကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းအခမဲ့ကြော်ငြာတေးဂီတကိုခံစားခြင်းနှင့်တစ်ဦးပရီမီယံကြေးပေးသွင်းနှင့်အတူ songs download နိုင်ပါတယ်။
အသစ်ကဂီတကိုရှာဖွေချင်ပါသလား? Spotify နှင့်အတူသငျသညျသစ်ကိုဂီတနှင့် podcasts တွေကို၏လောကဓာတ်ကိုရယူနိုငျပါသညျ။ ဂီတ, အနုပညာရှင်များ, နှင့်အယ်လ်ဘမ်များကိုနားထောင်, ဒါမှမဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သီချင်းစာရင်းကိုဖန်တီးပါ။
သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုက်ညီသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များရမယ့်အဆင်သင့်လုပ်သီချင်းစာရင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ Spotify နှင့်အတူသငျသညျသစ်ကိုဂီတ, နောက်ဆုံးပေါ် podcasts တွေကို, သင်၏အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်နှင့်အယ်လ်ဘမ်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
•ရောသမမွှေ mode ကိုတွင်တေးဂီတ Play ။ မဆိုအနုပညာရှင်, album သီချင်း, သို့မဟုတ်သီချင်းစာရင်း။
•ဂီတ Play ။ ဒါကဘယ်နေရာမှာမဆိုမည်သည့်သီချင်းမဆိုအချိန်ကိုဆိုလိုသည်။
Spotify ပရီမီယံ features:
•မည်သည့် device ကိုပေါ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဂီတ Play
•မည်သည့်စိတ်ဓါတ်များများအတွက်ဂီတ, အယ်လ်ဘမ်များ, သီချင်းစာရင်းများနှင့်အနုပညာရှင်ကိုရှာဖွေအမျိုးအစားအလိုက်စစ်ထုတ်ရန်
•အော့ဖ်လိုင်းနားထောငျအတှကျဂီတ Download နှင့်အခမဲ့သီချင်းသန်းပေါင်းများစွာကိုခံစား
• Discover ဂီတကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ရောသမအကြံပြုချက်များနှင့်အတူ
သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ကိုနားထောင်နေတဲ့အခါမှာ•အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာတွေ - ပဲမပြတ်မတောက်ဂီတ
•အဘယ်သူမျှမကတိကဝတ် - သင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုအချိန်ကိုပယ်ဖျက်
Spotify Love? ရုံသင်တို့အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဂီတနှင့်ဖွင့်စာရင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ယနေ့ download လုပ်ပါ။
http://www.facebook.com/spotify: Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ
Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: http://twitter.com/spotify
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ဒီ app ကိုသငျသညျထိုကဲ့သို့သော Nielsen ရဲ့အသံအတိုင်းအတာအဖြစ်စျေးကွက်သုတေသနအထောက်အကူပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်သည့် Nielsen ရဲ့ပရိသတ်ကိုတိုင်းတာခြင်း software ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ သငျသညျပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်ကြပါဘူးလျှင်သင်ရွေးချယ်ထွက်နိုင်ပါတယ် app ကို setting များကိုအတွင်း။ သူတို့ကိုကိစ်စတှငျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရိသတ်ကိုတိုင်းတာခြင်းထုတ်ကုန်များနှင့်သင်၏ရွေးချယ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်များအတွက် http://www.nielsen.com/digitalprivacy သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Spotify: Discover music, podcasts, and playlists အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Spotify: Discover music, podcasts, and playlists အား အခ်က္ျပပါ
stompin68 စတိုး 352 123.64k
Spotify: Discover music, podcasts, and playlists ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Spotify: Discover music, podcasts, and playlists အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 8.5.15.885
ထုတ်လုပ်သူ Spotify Ltd.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.spotify.com/legal/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: D6:A6:DC:ED:4A:85:F2:42:04:BF:95:05:CC:C1:FC:E1:14:CA:DB:32
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Spotify
အဖွဲ့အစည်း (O): Spotify
Spotify: Discover music, podcasts, and playlists APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ